amin’ny taranja Pancrace andiany voalohany nokarakarain’ny “Comission Malagasy de Pancrace Submission” tarihan’ny filohany, Andriambahoaka Luc, niaraka tamin’ny XXL sy ny tohana ofisialy nataon’ny GFC “Global Fighting Championship” tantanan’Atoa Guillaume Tissut. « Tratra ny tanjona tamin’ny ankapobeny, hoy ny ireo tompon’andraikitra ao amin’ny CMPS, fa nahatratra 50 mahery ireo mpikatroka tonga niatrika ny fifaninanana ka ady niisa 35 no notanterahina tao anatin’izany. Namaly ny antso nataonay ihany koa ireo mpijery tonga maro dia maro tety Ankorondrano izay hisaorana manokana tamin’ny fanohanany ny taranja. Teo amin’ny lafiny teknika, hoy hatrany ny tompon’andraikitry ny CMPS dia tena afa-po izahay teknisianina fa nampiharin’ireo mpikatroka isanisany an-tsakany sy an-davany teny ambony ringa izay norantovin’izy ireo tany amin’ny fampiofanana nomena azy ireo nialohan’ity fiadiana ny ho tompondaka ity ». Somary efa alinalina ihany vao nifarana izany fifaninanana izany omaly.